EMBA spol ။ Paseky nad Jizerou ro့- သင့် YouTube ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်မာလ်တီမီဒီယာစီမံကိန်းများကိုအခမဲ့ဂီတနှင့်မီဒီယာ downloads,
Homeသတင္းေၾကျငာခ်က္EMBA spol ။ s ကို ro Paseky nad Jizerou
EMBA spol ။ s ကို ro Paseky nad Jizerou	မှတ်ချက် Leave
EMBA spol ။ ro့ခကျြခကျြကုမ္ပဏီ Krkonose တောင်နယ်စပ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း၏အစ ကတ္တရာစေးစက္ကူ Paseky nad Jizerou နှစ်တွင်မှRösslerovýmiကညီအစ်ကိုတွေရှိစဉ်အခါ 1882, အ Jablonec ဒေသအတွက်ဖန်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လက်ဖြစ်အဖြူရောင်ကတ်ထူပြားထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များအတွက်စက်ရုံတစ်ရုံတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအာကာသတိုးချဲ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအသက်တာ၏တပြင်လုံးကိုလာမယ့်စင်မြင့်သည်။
ကတ္တရာစေးစက္ကူ၏သမိုင်းအတွက်အရေးကြီးသမိုင်းမှတ်တိုင်များထုတ်လုပ်မှု၏ကြီးမားသော်မှုအရာတို့သည်အနှစ် 1970 နှင့် 1989 အတွက်အဓိကအားဖြင့်အလိုအလျှောက်စက္ဏူထူစက်တွေ၏ installation ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဆယ်ရာစု၏ကိုးဆယ်ခုနှစ်, ကအမှတ်တံဆိပ် EMBA အောက်မှာခဲ့, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းအရေးပါမှုနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံသိမ်းဆည်းဘို့ Archive ကတ်ထူပြား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ အသစ်ကထောင်စုနှစ်ထုတ်လုပ်မှုအစုစုအတွက်ရုံး LAF များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ထမ်းများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အချင်းများရေရှည်အာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရှိပါတယ်။ ရုံကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ရောင်းပေမယ့် 30 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်ပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
EMBA ရှည်လျားသောအစဉ်အလာများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတာဝန်ရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတစ်ခကျြကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်စက္ကူကုသနဲ့လုံးဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းများမှာထုတ်လုပ်၎င်း၏အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ။ ယင်း၏ထုတ်ကုန်မှတဆင့် EMBA လည်းနိုင်ငံအများအပြားအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းအမွေအနှစ်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့စတေယျ။ အဓိကဒေသဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့န်ထမ်းများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအလုပ်လုပ်အခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဖြစ်ဒေသတွင်းလူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုကိုမှအလှူငွေများအတွက်တာဝန်ယူမှုကို၎င်း၏တာဝန်ရိပ် မိ. အဖြစ်။
ထိုဧရာမတောင်တန်းအတွက် Vitkovice →